China Isampula yamahhala iCarbomerCAS: ifektri nabaphakeli | I-Binshare
Isampula yamahhala ICarbomerCAS: 9007-20-9
I-Polyacrylic acid, ebizwa nge-PAA, i-alias 2-acrylic acid homopolymer, i-acrylic resin enamathela, i-acrylic resin, i-acrylic monomer polymer, i-acrylic resin emulsion, i-acrylic resin emulsion, iyi-polymer encibilikiswa ngamanzi ye-acrylic acid, kodwa futhi incibilika kwezinye izindawo ezibandayo izincibilikisi.
Igama lesiNgisi: Carbomer
Ifomula Yamamolekhula: C15H17ClO3
Isisindo samangqamuzana: 280.74668
I-EINECS cha. : 618-435-5
Iphuzu lokubila: 116 ° C
Ubuningi: 1.2 g / mL ku-25 ° C
I-Polyacrylic acid, ebizwa nge-PAA, i-alias 2-acrylic acid homopolymer, i-acrylic resin enamathela, i-acrylic resin, i-acrylic monomer polymer, i-acrylic resin emulsion, i-acrylic resin emulsion, iyi-polymer encibilikiswa ngamanzi ye-acrylic acid, kodwa futhi incibilika kwezinye izindawo ezibandayo izixazululi, njenge-methanol, i-di alkane ne-ethylene glycol. INCWADI YAMABHIZINISI EYAQHUBEKA YOKUQONDA 4.75. Ngoba i-molecule iqukethe inani elikhulu lamaqembu e-carboxyl, ingaphendula nge-alkali, utshwala, i-amine, kepha futhi nokwehla emzimbeni, ukonakala nokuphendula okuyinkimbinkimbi. Ingasetshenziswa njenge-ejenti yokuqina, i-dispersant, i-flocculant, i-adhesive ne-ejenti eyakha ifilimu, njll. Isetshenziswa kakhulu ekuhlanganisweni, oplastikhi, ukwenziwa kwamaphepha, izindwangu, injoloba, ukudla, imithi, izimonyo nezimboni zokwelapha amanzi.
Isisindo esiphansi samangqamuzana i-polyacrylic acid siqinile esicacile futhi esingenambala. Isixazululo sayo samanzi esingu-20% ~ 30% uluketshezi olukhanyayo oluphuzi noma olungenambala. Isisindo samangqamuzana singama-500 ~ 5000 kanti inani le-pH lingu-2 ~ 4. Ukuhlukaniswa kwayo okungaguquguquki kucishe kube ngu-5 × 10-5, okusondele ekuhlukaneni kwe-acetic acid (1.8 × 10-5) futhi kukhulu kakhulu kuneyokuqala ukwahlukaniswa okuhlala njalo kwe-carbonic acid. Ngakho-ke, i-polyacrylic acid iyi-asidi ebuthakathaka enamandla kune-carbonic acid. Imvamisa iChemicalbook izinzile kuma-acid aqinile, izisekelo eziqinile nezakhi, kepha ngaphansi kokushisa okuphezulu noma ukukhanya kwesikhathi eside, isisindo esiphansi samangqamuzana i-polyacrylic acid sisazophindaphinda, ukuze isisindo sayo samangqamuzana siqhubeke nokwanda, i-viscosity nayo iyanda, futhi ekugcineni iba isimo se-gelatine semvula esiqinile kusuka kusixazululo samanzi. Kuyi-ejenti ekhohlisayo ne-ejenti yokuhlanekezela i-lattice, futhi ingakha isakhiwo esizinzile esinezinsimbi zensimbi emanzini, njenge-calcium ne-magnesium. Futhi inokusebenza okuhle kokuhlakazeka, okungasabalalisa izinhlayiya ze-amorphous ezinjengezinhlanganisela zamakristalu, inhlabathi, uthuli, izinto ezonakalisayo kanye nokonakala kwezinto eziphilayo emanzini.
Isetshenziswa njenge-scale inhibitor ne-dispersant ekwelapheni amanzi ezimbonini. Ukuhambisana okuhle.
Ingaphathwa futhi ngaphambi kokuphuza amanzi. Isetshenziselwa ukuhlukanisa udaka olubomvu ekulungiseleleni i-alumina. Esitshalweni se-chlor-alkali sokucwenga i-brine yokukhiqiza izimonyo, yenza amafutha angakhuthaza ukumuncwa kwe-grey flavus, futhi angasetshenziselwa ukukhululwa kokulawulwa kwezidakamizwa.
Isetshenziselwa ukulungiselela umenzeli wokuqeda isikhumba nokunye kwempahla esezingeni eliphakeme. Ukwenza upende we-acrylic osetshenziselwa ukulungisa i-chromate, ukushuka okusizayo, njengokunciphisa ukungcoliswa kwe-chromium ukwenza ngcono ukusebenza kokusebenza kwe-polyvinyl chloride (i-PVC) esetshenziswa njenge-corrosion inhibitor, isimisi sekhwalithi yamanzi, i-ejenti yokuqina, i-ejenti yokuqina esetshenziselwa ukuqeda isikhumba , njenge-ejenti yokugcwalisa, usayizi we-textile warp kanye ne-stabilizer yekhwalithi yamanzi esetshenziselwa ukwenziwa kopende we-acrylic wekilasi-langaphambili lingasetshenziswa njenge-agent yokuqedela isikhumba nokunamathela, Isetshenziswa kakhulu ekuhlobiseni kwesikhumba okukhanyayo njengobuso besikhumba, ingubo yesikhumba , Chemicalbook setha isikhumba, esingathuthukisa ukumelana okugoba, ukunwebeka, ukumelana nokukhanya, ukumelana nokuguga, ukumelana okubandayo nokumelana nokushisa kwesikhumba.
Kuyi-ejenti enkulu yokuguqulwa kwefilimu yezingulube namafutha okuguqula isikhumba sobuso esiyimbudumbudu.
It ingasetshenziswa njenge-ejenti emisa kahle kakhulu, i-emulsifier, i-substrate esobala yezimonyo ezithuthukile kanye nezinto zokuxuba ezithaka imithi.
Futhi iyindlela esebenza kakhulu yokuncibilikisa amanzi.
Ingasetshenziswa futhi kumuthi wokuxubha amazinyo, i-ejenti yokuqina kanye ne-binder.
Isisabalalisi esisetshenziswa kakhulu, i-calcium carbonate, i-calcium sulphate namanye usawoti wama-microcrystals noma inzika ehlakazeke emanzini ngaphandle kwezulu, ukuze kufezekiswe inhloso yokuvimbela isikali.
Ngaphezu kokusetshenziswa njenge-scale inhibitor ne-dispersant ekujikelezeni uhlelo lwamanzi okupholisa, ibuye isetshenziswe kabanzi ekwenzeni amaphepha, izindwangu, ukuphrinta nokudaya, izinto zobumba, ukumboza nezinye izimboni.
Isetshenziswa embonini yamakhemikhali, umanyolo wamakhemikhali, ukuphrinta nokudaya, ukukhiqizwa kwamandla nokunye ukwelashwa kwamanzi.
Injongo: Kusetshenziswa ezitshalweni zamandla, izitshalo zensimbi nezensimbi, izitshalo zamakhemikhali, izitshalo zikamanyolo, izindawo zokuhluza uwoyela nezinhlelo zokufaka umoya nezinye izinhlelo zokujikeleza zamanzi ezipholisa ukuvimbela ukukala.
Langaphambilini Intengo enengqondo iLidocaine hydrochlorideCAS: 73-78-9
Olandelayo: Intengo enengqondo nokulethwa okusheshayo DL-BANTHIONINECAS: 59-51-8